» Afgarashadu Waa Dhag Jalaq Ha u Siin ( Maqaal Xiiso Badan)
Afgarashadu Waa Dhag Jalaq Ha u Siin ( Maqaal Xiiso Badan)
Feb 20, 2013 - jawaab	Aqrisatay:3831Madaxweyne Xasan markii la doortay dadka somaliyeed meel u joogaba waa soo dhaweeyey Soo dhawayntaasi salka kuma hayn tariikh wanaagsan iyo waxqabad gaar ah u horay u kasbaday ee waxay ku haysey salka oo kali ah nicitaan loo qabey kuwii ka horreyey asaga iyo karaahiyeysi muqaalkii shariifyada iyo xaabadii la shaqaynayey, wuxuu ku salaysnaa rajo laga qabey in colaad, musuqmaasuq iyo tuugo dhammaadaan.
Waxaa somaliyi si halhaleel ah ugu tilmaantay ama ay ugu gudbisey Xasan iyo dowladiisa waxyaabaha ay tabanaysey iyo jidadka xalkkooda loo marayo.waxaa ka mid ahaa waxyaabihii dowlada si an kala har iyo kala qaybsanaan midna lahayn durbadiiba looga dalbaday badbaada hantida qaranka ee aduunka darfihiisa ay ku bililiqaysanayaan kuwii lagu ogaa dhawrideeda iyo xannaanadeeda oo ay ugu horreeyeen dhismeyaal safaaradeed.
Waxaa dowladu uga jawaabtey qaylodhaantii shacbiga iyo su’aalihii xubnaha barlamaanka in ay samayn doonto baaritaan ujeedadiisu tahay nabadgalinta hantida qaranka ee qayladu ka soo gaartey. Wacnaydaa jawaabtu !!!, maxaase ka dambeeyey ?
Mar booqasho shaqo ay ku tagtay Roma wasiiradda arrimaha dibadda waxaa la geeyey marwada dhismihii safaaradda oo si dadban looga iibiyey shirkad talyaani ah say hoteel uga dhigato. Waxay xubno jaaliyadda ka mid ahi wasiiradda ka siiyeen dhismaha warbixin waafi ah, waxay kaloo fakar ka siiyeen qiimaha dayactirka dhismuhu u baahan yahay iyo dhibaatada ku hoos daboolan waxa danjiruhu ku sheegayo ijaar.
Intaa wixii ka dambeeyey wax war ah, haba yaraadee, oo la xiriira badbaadintii dhismaha oo ka soo baxay xagga dowladda ma jiro. Ayaan darro waxaaba hadda la sheegayaa in safaaraddu samaysay wax la yiraahdo (concessione del fabbricato) oo ah in shirkaduu yeelatay awooodii dhismaha. Maca salaama !!
Waxay u ektahay in jawaabtii wacnayd ee la siiyey shacbiga ay ahayd dab damis runtuna ahayd: qollada ku hawllan iibkoy dhagta jalaq ha u siinina dadka (ma kasta)iska qaylinaya.
waxaa shacbiga somaliyeed Dowladda xaq ugu lahaa walina ugu leeyahay in laga wargaliyo waxa laga yeelay arrinta hantidaa qaran ee walwalkeedu saaqay ummadda oo idil. Ma aha dowladdu in waxa ay rabto kali ah u sheegto dadka; ka sii culus ma aha dowladduu dadka been u sheegto; ma aha wax ay ka damacsan tahay si ka duwan sida dadku rabo in ay dadka ugu sheegto sida u rabo.
ka aamuska arrinta iyo u sii deynteeduba sidii danjiruhu ku wadey waxay muujinayaan:
Xil gudasho xumo
u xil qabid la’aan waxa dadku doonayo iyo ka turjumida walwalladiisa oo dil.
Ku haboonaan la’aan aamin iyo wanaag ka sugid xageeda.
Waxay u egtahay in sawirka dhabta ah iyo aragtida dowladdani ayna waxba duwanayn midkii kooxdii bililiqada badda qaran ee Cabdishakuur-kii taariikhdiisu ku ba’aday oo hoogtay somalia. .waxaa tilmaan yaable ah in la sheegayey maaldhaweyd madaxweyne Xasan oo Cabdishakuur ku hagayo London.
Waxaan ku khatimayaa in an ugu yeero qof kasta oo somaliya in u xil iska saaro qaran badbaadinta asagoo cid kasta ku xukumaya waxa ay qabato ee an ku sirmeyn kaliya erayo qurquruxsan oo ready made.